Gaas: ammaanka iyo horumarka gobolka ayaan u kuur gelayaa
November 27, 2014 (GO)- Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shir-saxaafadeed ku qabtey madaxtooyada magaalada Bosaso ayaa ka warbixiyey ujeedada socdaalka uu maanta Bosaso kusoo gaarey.
Gaas ayaa sheegay in muddo todobaad ah Bosaso sii joogi doono una kuur geli doono xaaladaha ammaanka iyo arrimaha bulshada islamarkaana kulamo gaar gaar ah la yeelan doono qaybaha kala duwan ee bulshada.
Maashaariicda uu sheegay inuu sida gaarka ah ugu kuur geli doono waxaa kamid ah mashruuca la doonayo in lagu ballaariyo garoonka diyaaradaha ee Bender Qaasim. Mashruucaas ayaa hakad galay kadib markii dhowr shirkadood oo maxalli ahi isku qabsadeen qandaraasyada yaryar ee shirkadda CCECC bixineyso.
Dhanka kale wuxuu lagama maarmaan ku tilmaamay kulamada uu la qaadanayo bulshada gaar ahaan isimmada iyo waxgaradka, maadaama sida uu sheegay dowladiisa muhiimad gaar ah u leeyihiin talooyinka ka imaanaya dhanka waxgaradka bulshada.
Shirka dib-u-heshiisiinta iyo gobollada maqan:
Mar wax laga weydiiyey Gaas qorshaha xukuumadiisa ee ku wajahan soo celinta gobollada Puntland ka maqan, wuxuu ka gaabsaday inuu arintaas ka hadlo isagoo sheegay in dhulkaasi yahay dhul Puntland ka maqan lagana warqabo.
"dhulka maqan Puntland buu ka maqan yahay, Puntland buuna waajib ku yahay soo celintiisu...marka intaas anigu kuuma dhaafi karo wax kale oo aan oran karaa ma jirto" Madaxweynaha ayaa sidaas yiri.
Dhanka mar uu ka hadlayey shirkii dib-u-heshiisiinta guud ee uu horay ugu baaqay, wuxuu sheegay inaan weli laysku afgaran waqtiga rasmiga ah ee uu dhici doono balse la filayo inuu qabsoomo dhammaadka bisha January ee sanadka soo socoda.
Mooshinka laga keenay Ra'iisul Wasaare Cabdiweli:
Gaas ayaa mar wax laga weydiiyey khilaafka marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya ee ka dhex aloosan labada mas'uul ee ugu sarreeya Dowladda Federaalka iyo welba mooshinka laga keenay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Cabdiweli, wuxuu sheegay in Puntland horay u cadeysey mowqifka ay arintaas ka taagan tahay.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in haba yaraatee wax dan ahi ku jirin mooshinka xilligan laga keenay xukuumadda maadaama uu caqabad ku noqon doono horumarkii socdey islamarkaana dib u dhac ku keenayo qorsheyaalkii la doonayey inay hirgalaan kahor sanadka 2016.
Waa markii saddexaad ee Cabdiweli Gaas Boosaaso soo gaaro tan iyo markii loo doortey madaxweynaha Puntland, waxayna xalay isaga wafdigiisu kusoo hakadeen degmada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar.